रिगामा के गर्ने शहर जुन नयाँ र पुरानो वास्तुकलालाई एकजुट गर्दछ - लाटभिया - 1aviagem.com
रिगामा के गर्ने शहर जुन नयाँ र पुरानो वास्तुकलालाई एकजुट गर्दछ - लाटभिया
Previous post: Banco Inter
Next post: Os Cavaleiros Templários Existiram?
पोष्ट गरिएको 28 नोभेम्बर 20192समीक्षाहरू द्वारा रोमोमो लुकाना
खैर, रीगाको बारेमा कुरा गर्नु अघि, किन म त्यहाँ पुगेँ?
विश्वका सबै देशहरू, वा कम्तिमा उनीहरूमध्ये धेरैलाई जान्ने इच्छामा लाट्भिया आधा बाटोमा थियो र आधा बाटो लाटभिया थियो। एस्टोनिया र लिथुआनियाबीच
मेरो आश्चर्यको लागि बस भाडा ताल्लिनको उडान भन्दा अनौंठो सस्तो थियो त्यतिबेला यसको लागि मात्र अमेरिकी डलर 7,00 खर्च भयो! र रीगाबाट Vilnius प्लस USD 9,00 मा निस्कनुहोस्। त्यो हो, रिगा एक व्यवहार्य विकल्प (यो मध्य बाटो थियो रूपमा) साबित भयो र कुल वित्तीय लागतको लागि आर्थिक। तल्लिनबाट भिल्नियस (कुल अमेरिकी डलर एक्सएनयूएमएक्स)। यो बसमा मनोरन्जन स्क्रिन, कफी, तातो चकलेट, चिया र पानीको रूपमा हुनेछ! (केहि कम लागत एयरलाइन्स भन्दा राम्रो)।
म स्वीकार गर्दछु कि मेरो योजना केहि आराम पाउनको लागि थियो, जे भए पनि, पर्यटन भनेको त्यस्तो गतिविधि हो जसले ती गर्नेहरूबाट धेरै ऊर्जाको माग गर्दछ। म शहर भ्रमण गर्न चाहान्छु र त्यस्तै भयो।
तर बसोबास र शहर वरिपरि पैदल पछि, उनले पहिले नै मलाई मंत्रमुग्ध गरे। होटेलबाट दृश्य भानु (वनाउ) पुलमा थियो जुन दौगवा नदीमा बग्छ।
र किनारमा त्यहाँ थियो योद्धाहरूका लागि स्मारक जसले घाइतेको स्मृतिलाई सम्झाउँदछ र साथै दौगवा नदीमा डुबाउँछ 13 जनवरी 1905। रेलवे ब्रिजको नजिक। ल्याटभियालीमा नाम: पाइमेनकिलिस 1905।
यो फोटोमा सानो देखिन्छ, तर केवल क concrete्क्रीट आधार एक व्यक्तिको भन्दा अग्लो छ। माथिको फोटोको पृष्ठभूमिमा हामी रेलवे ब्रिज देख्छौं।
वैसे रीगामा वरपर जानको लागि पहिलो सल्लाह भनेको स्मारक र छानामा चिन्ह लगाउनु हो। धेरै जसो पर्यटन पैदल मा गर्न सकिन्छ र यी ठाउँहरु स्थलचिह्न को रूप मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो जोड दिन महत्त्वपूर्ण छ कि रीगाको सडकहरू समानान्तर छैनन्, आफ्नै डिजाईन बनाउँदै।
त्यसैले चिन्हका रूपमा स्मारकहरूको आवश्यकता। थप रूपमा, प्रत्येक छतमा एक काम र जिज्ञासा हुन्छ! र म मजाक गर्दै छैन, रीगासँग मैले भेटेको सबैभन्दा सामञ्जस्यपूर्ण र बिभिन्न वास्तुकला छ! त्यसोभए तपाईं छतमा "बिन्दुहरू पार गर्नुभयो" चिन्ह लगाउन सक्नुहुन्छ। उदाहरण: मुर्गेको छत, बिरालो छत, क्रस छत, डु roof्गाको छत, घण्टी, डबल, ट्रिपल छत, र यस्तै।
भवनहरूको र colors्ग र आकारहरू मार्क गर्न यो पनि सम्भव छ।
कोमो दोस्रो सल्लाह मेरो सुझाव छ कि तपाई हप-अन हप-अफ टुर बस टिकट किन्नुहोस्। कारण? तपाईं यसलाई स्थानीय बसको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ पासको वैधताको बखत वरिपरि जानको लागि। तपाईं 24 घण्टा, वा 48 घण्टा खरीद गर्न सक्नुहुनेछ र जति सक्दो पटक तपाईंलाई बसमा अन र अफ पाउन सकिन्छ। तर तपाईले कुन मार्ग लिनुहुन्छ भनेर सावधान हुनुपर्दछ। यस बससँग दुईवटा मार्गहरू छन् जुन केही स्टपहरूमा एकीकृत गरियो। निलो र हरियो पाठ्यक्रम। कार्यक्रममा ध्यान दिन पनि आवश्यक छ। यस प्याम्प्लेटमा डेलिभर हुन्छ जुनसँग यो समय बितिसकेको हुन्छ र कहिले यो चल्दैन। समयको बारेमा। म सम्झना रूपमा, बस 17: 00 घण्टा नजिक यसको अन्तिम गोल गर्दछ। तर त्यो परिवर्तन भएको हुन सक्छ। यो लाजको कुरा हो किनभने रीगाको रात रमाइलो छ। तर यदि तपाईलाई थाहा छ वा स्थानीय बस लाइनहरु प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने यसले तपाईको यात्रालाई अझ सस्तो बनाउँदछ, किनकि शहर टुर बस स्थानीय बस भन्दा धेरै गुणा महँगो छ।
पक्कै पनि पर्यटक बस को साथ यो पहिचान गर्न सजिलो छ, र मार्ग जान्न। दृश्यहरूको बारेमा धेरै कुरा गर्ने अडियोहरूको साथसाथै। Eयसले 10 भाषाहरूमा अडियो प्रदान गर्दछ। तर त्यहाँ कुनै पोर्तुगाली छैन। मैले अडियो अ used्ग्रेजीमा प्रयोग गरें।
पुरानो शहर केन्द्र मार्फत (पुरानो शहर) नगरपालिका वर्ग कहाँ छ।
मरीन स्मारक नजिक (लातवियाई राइफलमेन स्मारक) जो स्मारकको उत्कृष्ट रूसी शैलीमा3पुरुष हुन्। त्यहाँबाट दुबै पर्यटक बसहरू (हरियो वा निलो मार्ग), साथै वर्गमा पर्यटक सेवा, र केही हिड्ने टुरहरू छन्। त्यसोभए पक्कै पनि यो सुरु गर्नको लागि उत्तम स्थान हो।
वर्गमा आफैं पहिले नै धेरै भेट्न जान्छ। यो पर्यटन को लागी शहर भ्रमण गर्न चाहने जो कोहीको लागी करीव आवाश्यक हुन्छ।
वर्गमा ब्ल्याकहेड्स घर छ (रीगाको सबैभन्दा प्रतिष्ठित ठाउँ)। यो यस स्मारकको छेउमा छ। यो स्थान यति आइकनिक छ कि यसको लागि मात्र पोष्ट योग्य हुन्छ। म यो चाँडै गर्न चाहन्छु।
यस वर्गको नजिक पाउडर टावर पनि छ जुन 13 शताब्दीको सुदृढीकरण थियो र आज पनि बाँकी छ। तर यो संग्रहालय बन्यो।
सेन्ट पिटर्स क्याथेड्रल, शहरको सब भन्दा पुरानो। उन्नाइसौं शताब्दी को मिति। र यो खडा गर्न सुधार भइरहेको छ। (पास्टर छत)।
र क्रिसमसको समय भएकोले, हामीसँग पनि संसारको पहिलो क्रिसमस रूखको नक्कल छ! हो, लाटभियनहरूले यही भन्छन्। यो रीगाको लात्भियामा स्थित छ, मध्य वर्गमा र 1510 बाट मितिहरू।
पौराणिक कथाको रूपमा यो छ कि केहि मानिसहरु ज fet्गलबाट काठ ल्याउन गए र ठूलो तातो राख्नको निम्ति बोनफायर बनाउँथे, र उनीहरूले अधिक काठ ल्याउँदा पाइनको ठूलो टुक्रा पछि प्रयोगको लागि राखिन्थ्यो। तर वरपरका केटाकेटीहरूले त्यो पाइन फुल्न थाले जब ती पुरुषहरूले अधिक काठ खोजिरहेका थिए।
जब तिनीहरू फर्किए तिनीहरूले पाइनका रूखहरू सबै बच्चाहरूद्वारा सजिएका देखे। उनीहरू थकित भएर उहाँको नजिक गए। यसरी तिनीहरूले पाइन रूखका हाँगाहरू बीच आकाशमा चम्किरहेका ताराहरू देखे। त्यसोभए तिनीहरूले यसलाई बोनफायरको रूपमा प्रयोग गर्न छाडिदिए। र यसैले प्रत्येक वर्ष यस समयमा उनीहरूले सल्लाको रूखलाई यस समयमा सुन्दर बनाउनमा ल्याए।
र त्यसबेलादेखि क्रिसमस रूखको सजावटको यो चलन सिर्जना गरिएको छ। यो आजको पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा बित्यो।
यसबाट तपाईं पनि क्रसमस लाईटहरू कहाँबाट आयो त्यो घटाउन सक्नुहुन्छ। र किन यसले हिउँको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो कथा ठीक छ ?!
र सोच्न कि पहिलो क्रिसमस रूख लगभग काठमा परिणत भयो ...
र वर्ग मार्ग बन्द?
तपाईको भवन पनि देख्न सक्नुहुन्छ क्रेमिलिन रीगा, यो सोभियत संघको हिस्सा भएकोले र बाल्टिक सागरमा रहेको एक प्रतिरक्षा मोर्चाको प्रतिनिधित्व गर्‍यो। खैर, क्रेमलिनको अर्थ दुर्ग, वा सुदृढीकरण हो। सबैभन्दा राम्रो ज्ञात मास्को हो। (र तपाईं यस लिंकमा मस्कोका सल्लाहहरू जाँच गर्न सक्नुहुन्छ)।
रेडियो र टिभी टावर।
तपाईं रेडियो र टेलिभिजन टावर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तर कुनै गल्ती नगर्नुहोस् ऊ जस्तो देखिन्छ त्यो भन्दा टाढा हुन्छ। यो एक गाईडको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ किनकि यो प्राय: सबैतिरबाट देखिएको छ।
स्वतन्त्रता स्मारक (ब्रुभाबास पाइमेनिक्लिस)
खैर, सबै स्मारकहरु को यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। स्वतन्त्रता स्मारकले रीगाको कथा धेरै सारांशमा वर्णन गर्दछ। र सोभियत संघले लाटभिया संलग्न भएको बेलामा उनीहरूले यस स्मारकलाई धेरै चोटि ध्वस्त पार्न कोशिस गरे किनभने उनीहरू विश्वास गर्दछन् कि यसले लाट्भियामा देशभक्तिलाई प्रेरित गर्दछ। लट्भिया आज स्वतन्त्र देश हो, त्यसैले हामी भन्न सक्छौं तिनीहरू सही थिए। राम्रो कुरा तिनीहरू ध्वस्त पार्न सक्दैनन्।
यो स्मारक हो जहाँ बहुभुजको प्रत्येक अनुहारले रिगाको इतिहासको एउटा अंशलाई स्वतन्त्र देशको रूपमा यसको स्वतन्त्रता र गठन नभएसम्म बताउँछ।
आधारमा हामी केहि नाइट्स टेम्प्लर देख्छौं, कामदार मान्छे, लेखक, पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धमा सेना, स्विडेनी आक्रमण, जर्मनीलाई पराजित, रूसी सामिल, मुक्ति आन्दोलन र अन्तमा स्वतन्त्रता। लाट्भियामा युद्धले ग्रस्त व्यक्तिहरू छन् जसमा शासकहरूको प्रभाव रमाईलो तरीकाले मिसिएको छ, साथै धेरै मूल रीतिरिवाजहरू (क्रिसमस ट्री जस्तै) को मर्मतसम्भार पनि। शीर्षमा रहेको तामा र काँसाको मूर्तिले स्वतन्त्रता प्रतिनिधित्व गर्दछ र लाटभियाका तीन जिल्लाहरूको प्रतीक गर्दै प्रत्येक हातमा तीन तारा लिन्छ (Vidzeme, लाटगालेeCourland)। प्रत्येक बहुभुज अनुहारको फरक छवि हुन्छ। हाल स्मारक सार्वजनिक सभाको लागि स्थानको रूपमा कार्य गर्दछ। र यो एक राम्रो बैठक स्थान हो किनभने यसको 42 मिटर उचाईको वरिपरिको ठाउँबाट देख्न सकिन्छ। संयोगवश त्यहाँ एक धेरै सुन्दर पार्क Bastejkalna पार्क छ। जुन राम्रो संग तालमेल राख्छ र सूर्यास्त हेर्नका लागि उत्तम हो।
मानौं कि शहरले हाल १ 13 औं शताब्दीको वास्तुकला मात्र मिसाउँछ। प्रत्येक भवनको आफ्नै मोडल, फेकड र शैली हुन्छ।
निश्चय नै आर्ट नोव्यू राजधानीको वास्तुकलाको मजा लिन एउटा ज्यादै रोचक कुरा छ। मैले बुझें पछि यस शैलीले स्पष्ट ऐतिहासिक ढाँचाबाट बच्न ठीकसँग खोज्दछ, तर अन्य पक्षहरूलाई समेट्छ। यो अर्थको एक "इमान्दार" फार्म हुन खोज्छ र आफैलाई स्थान दिन्छ, अन्य कम्पोनेन्टहरू ल्याईरहेको छ। र प्रत्येक वास्तुकारले आफ्नै शैली बनाउँछ। त्यसोभए नयाँ टाउनमा एउटा बुलेभार्ड छ जुन विभिन्न र असाधारण अनुहारहरूको लागि वास्तविक प्रतिस्पर्धा हो। यो रीगा पोलिटेक्निक संस्थानद्वारा संचालित थियो जुन आज विश्वविद्यालय बन्यो। र आर्किटेक्टहरूको सम्पूर्ण पुस्ताले उनीहरूको शैली र वातावरणीय धारणा देशको सिमाना बाहिर निर्यात गर्‍यो। रीगा अन्तत: संसारमा जहाँसुकै आर्ट नुव्यू वास्तुकलाको सबैभन्दा ठूलो सांद्रता भएको शहर बन्न पुग्यो र यसको शैलीको एक तिहाई क्षेत्र पुनर्निर्माण गरियो। त्यसोभए हामी भन्न सक्दछौं कि रीगाले पुरानो र नयाँ वास्तुगत पुस्ता पार गर्दछ। हुनसक्छ त्यसले सडकहरू समानान्तर नभएको कारण वर्णन गर्दछ। र किन विभिन्न अनुहारहरू, वर्ग, रेस्टुरेन्ट, बगैंचा एक अर्कासँग धेरै सामञ्जस्यपूर्ण छन्। यो तमासा हो!
न त यो दौगावा नदी नै मिस गर्न सक्दछ, जुन रीगाको मुख्य नदी हो र यति धेरै लडाईहरूको दृश्य हो। बसको आवाजले मैले सुनें कि नदीको फेदमा फ्रान्सको राजाको आदेशमा नाइट टेम्प्लरमध्ये एक जनाको खजाना हुनेछ, जो आफ्ना जहाजहरूसितै डु s्गा खान्छ। यो खजाना कसको हुनेछ? अस्थायी नाइट, ब्ल्याकहेड्सको घरको मालिक। तर यो केहि आउँदो पोष्टको लागि रहनेछ। हामी लाट्भिया हुँदै यो पहिलो यात्रामा हाम्रो सुरूवात पोइन्टमा फर्क्यौं!
यदि तपाईंलाई यो मनपर्‍यो भने, त्यो पछाडि छोड्नुहोस् र अर्को कथा र यस कथाको निरन्तरता याद नगर्न हामीलाई अनुसरण गर्नुहोस्। केवल रातो बटन क्लिक गर्नुहोस् र ईमेल प्रविष्ट गर्नुहोस्। 😎👉
कसरी कला नुउउ क्रिसमस रूख ब्ल्याकहेड्स नाइट्स टेम्प्लर दौगावा लाटभिया स्वतन्त्र स्मारक पहिलो यात्रा रीगा
2 टिप्पणी	टिप्पणी छोड्नुहोस् >
Pingback: के नाइट्स टम्प्लर अस्तित्वमा थियो? - 1aviagem.com
Pingback: एक ब्राजिलियन संग साक्षात्कार, एक विनिमय को अनुभव कस्तो छ? - फायरन्ज - इटाली - 1aviagem.com